Maraykanka oo soo saaray kaniin casri ah oo caloosha fariimo kasoo dhex gudbinaya – Filimside.net
Maraykanka oo soo saaray kaniin casri ah oo caloosha fariimo kasoo dhex gudbinaya
March 17, 2019 Jabriil Abdikadir
Waxaa Qoray: Jabriil Abdikadir
Taariikhda: March 17, 2019
Wakaaladda dawada Maraykanka ee FDA ayaa ansixisay kaniin cusub oo lagu dhex guntay aalad casri ah oo caloosha kasoo dhex gudbineysa macluumaadka la xiriira in qofka loo qoray kaniinka uu qaatay iyo in kale.
Kaniinkan ayaa waxaa soo saarta shirkadda Abilify MyCite waxaana loogu talogalay dadka miyir daboolba, waxaana qasab ah in qofka loo qorayo uu ogolyahan marka hore.
Balse waxaa la sheegay in mararka qaar fariinta aaladda yar ee kaniinka ku dhex jirta ay la daahi karto, soona gudbin karto saacado kadib.
Aaladan ayaa fariinta u gudbinaysa taleefoon casri ah oo uu haysto qofka bukaanka ah, kadibna waxa ay fariinta usii gudbaysaa dhaqtarkii dawada qoray, kaas oo ogaanaya in bukaanka uu dawada qaatay iyo in kale.
“In la ogaado in qofka qaba xanuunada maskaxda uu dawadiisa si fiican u qaato waa arrin fiican, FDA-na waxa ay taageeraysaa isticmaalka iyo soo saarka tiknoolajiyadda cusub, waxaana naga go’an in aan la shaqayno shirkadaha wax soo saarka dawada” ayuu yiri Mitchel Mathis oo ka tirsan maamulka wakaaladda FDA.
Waxaa Aqrisay 427
Filimka Kalank maalintiisa labaad qiyaasta xili hore lacagaha uu keenay shabakada BOI soo daabacday April 18, 2019
Star Power-kii 50-maadkii: Waa Kuwee 3-Atirisho Sanadii 1956 Bollywood-ka Ugu Awooda Badnaa April 18, 2019
Star Power-ka 50-maadkii: Waa Kuwee 3-Atoore Sanadii 1956 Bollywood-ka Ugu Awooda Badnaa April 18, 2019
Wwe Filimside Quizzes April 18, 2019
10 Sawiro Oo Si Weyn Looga Hadal-haayay Gudaha Bollywoodka Bal Daawo Adigaana Yaabi Doona April 18, 2019
Xaqiiqooyin u gaar ah filimka caanka ah Koyla oo la daawaday maanta oo kale 22-sano ka hor April 18, 2019
Maanta oo kale Boxoffice-ka maxaa ka dhacay: Koyla (1997) & 2 States (2014) ayaa soo baxeen April 18, 2019